ADOBE PREMIERE PRO မှာနှေးကွေးသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို - ADOBE PREMIERE PRO ကို - 2019
နှေးကွေးခြင်းနှင့်ကို Adobe Premiere Pro မှာဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဖိုင်နှင့်အတူစတင်ရန်, က Pre-loading လုပ်တာဖြစ်သင့်သည်။ လက်ဝဲဘက်ခြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမကိုအမှီနှင့်အတူအတန်းကိုရှာပါ။
ထိုအခါလက်ျာ mouse ကို button ကို click လုပ်ပါ။ တစ်ဦး function ကိုရှေးခယျြပါ «စကားပြန်ဗီဒီယိုဖိုင်».
, ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌ «ဒီဘောင်နှုန်းသည်ဆိုပါစို့» ဘောင်၏တပ်မက်လိုချင်သောအအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အဲဒီမှာခဲ့လျှင် 50, Enter 25 နှင့်ဗီဒီယိုနှစ်ကြိမ်နှေးကွေးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကသူ၏ဗွီဒီယိုအသစ်အချိန်ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့နှေးကွေးပါကပိုရှည်ဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ အလားတူယင်းအရှိန်နှင့်အတူအခွအေနေပေမယ့်ဒီမှာဘောင်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
A ကောင်းဆုံးလမ်း, ဒါပေမယ့်ကိုသာမြေတပြင်လုံးကိုဗီဒီယိုသည်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာ၌အမြန်နှုန်းကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ဘာလုပ်သနည်း
အဆိုပါကိုသွားပါ "အချိန်လိုင်း"။ ကျနော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၏နယ်နိမိတ် mark ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါက tool ကိုသုံးပြီးပြု "Blade ကို"။ လည်းအသီးသီးသီးနှံရဲ့ start နှင့်အဆုံးကိုရွေးချယ်ပါနှင့်။
ယခုငါတို့ဒီ tool နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကို select "အထီးကျန်ထားခြင်း"။ နှင့်အညီ, ပေါ်မှာမောက် Right-click လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသော Menu ထဲမှာ «မြန်နှုန်း / Duration: ».
လာမယ့် window ထဲတွင်သင်အသစ်များကိုတန်ဖိုးများကိုရိုက်ထည့်ရပါမည်။ သူတို့ကတစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းနှင့်မိနစ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ ပြောင်းလဲမှုကိုတဦးတည်းဦးတည်ချက်သို့မဟုတ်အခြားထဲတွင်ဂဏန်းတန်ဖိုးများပြောင်းလဲနေကြောင်းပေါ်ဆွဲ, တစ်ခုခုကိုကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်အထူးမြှားသုံးပြီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားနေဖြင့်အချိန်နှင့်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကထားရှိခဲ့ 100%။ ငါကဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ချင်နဲ့ကျွန်မအားငါပေးမည် 200%, မိနစ်, အသီးသီးကိုလည်းပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ deceleration တန်ဖိုးကိုမိတ်ဆက်မူလထက်နိမ့်သည်။
ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, နှေးကွေးခြင်းနှင့်ကို Adobe Premiere Pro မှာဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သေးငယ်တဲ့ဗီဒီယိုဆုံးမခြင်းငါ့ကိုအကြောင်းကို5မိနစ်ကိုယူ။
ဗီဒီယို Watch: COMO DESCARGAR E INSTALAR ADOBE PREMIERE PRO CC 2019 FULL + ACTIVADOR (အောက်တိုဘာလ 2019).